Sina : Hividy ny petra-bolan’ny BP ? Azony atao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2010 20:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 日本語, English
Amin'izao fitsidihan'ny sekreteram-panjakana misahana ny raharaham-bahiny Britanika William Hague any Sina noho ny fanasan'i Beijing ho amin'ny fifampidinihana hanamafisana ny fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'ny roa tonta izao, nisafidy ny hifantoka manokana ny amin'ny fisian'ny tsaho milaza fa ny tena anton'izao fifampidinihana izao dia ny mety hisiana ampahana petra-bola i BP hovidian'ny CNOOC kosa ny fampahalalam-baovao an-tserasera , ary heverina ho fitrandrahana solika any Amerika Atsimo no tena voakasik'izany.
Toa anisan'ireo vitsy izay manan-kolazaina betsaka mikasika ny fividianana an'i BP ireo mpamaky ao amin'ny NetEase:
Manambola i Sina, an-davitrisa dolara amerikana maromaro ny tahirim-bola vahiny, mbola kely ny 5 tapitrisa tapitrisa very nandritra ny findramambolan'ny Fannie Mae sy ny Freddie Mac. BP ô, tonony ny tolo-bidinareo, kanokanom-bola fotsiny izany ho anareo .
Tena milalao vola ry zareo no sady vendrana, alefaso haingana
Iza no tsy mahalala ankoatra an'i Sina fa tamin'ny 27 Jona, dia voasazy handoa onitra mitentina 420 lavitrisa Yuans i BP[?], izany hoe mihoatra noho ny [dolara 19 ] lavitrisa amin'ny fitambaran'ny petra-bola miasa any Amerika. Tsy misy fomba hahafahan'izy ireo manangona izany lelavola izany velively, izay antony tsy hahafahan'izy ireo mivarotra afa-tsy hoe manao sorona goavana maromaro. Bankirompitra i BP Amerika avaratra ary mety ho toy izay ihany koa no hahazo ny BP Amerika Atsimo .
Sina no handoa ny faktiora [amin'ny zava-nitranga ao amin'ny] helodranon'i Meksika, tena tsy misy zavatra tsy vitan'i Sina marina !
Rehefa mitsahatra ny tsy manompa ahy intsony dia hovidiako daholo.
ny tranoben'i CNOOC any Beijing, hita ao amin'ny Flickr an'i Helen Sotiriadis.
Mba tsy hivarotana fatiantoka, tsy aleo ve mikatona dia alefa avokoa ny fananana! Miandry isika!
“Araka ny hevitr’ i Cui Xinsheng, mety ho fividianana fanariam-bola ny fividianana an'i BP, amin'izao fahapotehana tsy manam-piafarana mbola itakian'ny governemanta Amerikana izao sy ny teknolojia an'i BP izay efa nilaozan'ny toetr'andro, kely ny fanantenana hiarenan'ny orinasa.”
——Mazava be fa tsy ho voaonitra mihitsy ny very, fa mila matoky ny Antoko sy ny governemanta ianao. Mila manao izay rehetra mety ho vitantsika isika hanaporofontsika fa mety ho hery tompon'andraikitra isika, eny fa na midika aza izany fa mety hahazo kapoka isika .
Tsy ny vola no tadiavin'i Beijing, fa ny ambo entin'ny hery fanintonana politika
Marina, fa ananantsika ny vola, saingy tokony handeha amim-pahamalinana isika, mametraka fepetra, fa tsy mirotoroto mandanindany vola. Voalohany aloha manala ny fahirano ataon'ny Vondrona Eoropeana amin'i Sina amin'ny sehatry ny fitaovam-piadiana, avy eo isika miresaka .
Be indray ny kolikoly ho azon'ny mpiasam-panjakana Sinoa amin'ity adi-varotra ity
Manjary lasa mpandraoka fako ankehitriny ny mpandoa hetra rehefa tsy manam-bola intsony na voasoloky na takalon'ainan'ny Tsenam-bola [Bourse] .
** , raha hividy azy ihany i Sina, raha tsy bankirompitra io dia tsy “coté” na ho tafiditra lisitra ho azo iadiam-barotra [any amin'ny tsenam-bola]
Jereo fa moa tsy tena mpanankarena tokoa isika ? Na i Angletera aza tonga aty amintsika miangavy ny handoavantsika ireo faktiorany .
Inona indray moa ny andalana voalohany amin'ny hiram-pirenentsika ?
Manao an'i Sina ho ivotoerena fanodinana fako ireto fatina manampahaizana sy voaozona ary saro-tahotra ireto!
Raha mba hahazoantsika haja kokoa moa tsy mampaninona ny andoavana io vola io .
Ajanony any. Nangalatra ny fisotroan-drononon'ny Britanika i BP noho ity raharaha ity rehefa niara-kopa-kisasahana tamin'i Amerika. Ampandoavintsika [izay nalainy] ireo governemanta roa ireo ary holavina ny adivarotra. Mbola ananantsika betsaka ny Amerikana sy ny Britanika, ny antony hananan'izy ireo fiainana ambony amin'izao dia noho ny fandoavantsika ho azy ireo ny ràntsika, ny hatsembohantsika ary ny ranomasontsika .
Eny ary, tsara, fa aza adinoina kosa ny iraka lehibe mila tandrovin'ny matanjaka eto Sina, ny hahafahan'ny zanany lahy sy vavy na iza na iza mivezivezy am-pilaminana any Angletera.
“Tsy mandrefy na ny fahaizantsika na ny herimpontsika ny PNB-ntsika…,tsy refesiny ihany koa ny fahendrentsika na ny fahalalantsika, na ny fitiavantsika na ny fakamamintsika ny tanindrazantsika, mandrefy ny zavatra rehetra izy raha fehezina, ankoatra izay zavatra mety manatsara ny fiainana . Ary afaka milaza ny zavatra rehetra momba ny Amerika izy ankoatra izay ireharehantsika amin'ny maha-Amerikana antsika .” —Robert F. Kennedy
Mpamadika tanindrazana izay rehetra manaiky ny hividianana an'i BP
Ho lasan'i Sina avokoa na ho ela na ho haingana ny orinasa marorantsana rehetra …
Jereo ny fahafinaretana amin'ny fananam-bola ? Tonga mandondona [aty amintsika] izay rehetra manana olana, tonga mangataka antsika handoa ny trosany izay miaraka amin'ny S [tsy manana na inona na inona intsony]. Mandoa ho an'i Freddie sy i Fannie isika, ary izao dia misy an'ity fiparitahana solika any amin'ny helodranon'i Meksika ity, ahoana ny fomba handavantsika ny tsy handoa izany?